ဘုန်းကျော်: Jan 15, 2010
မော်စကိုက ကမ္ဘာ့အဆင့်မီနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာကျောင်းသားတွေရှိနေပါတယ်
ဒီကျောင်းကဘွဲ့ရတဲ့ ပညာတက်လူငယ်တွေ သြစတျေးနိုင်ငံမှာ တပုံကြီးရှိတယ်။ Skilled Person အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အထင်ကရတက္ကသိုလ်ကြီးတခုဖြစ်သလို၊ သမိုင်းဝင်လည်းဖြစ်တယ်။
အဲဒိက ဘွဲ့ရတာနဲ့ သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Company တွေမှာ၊ အစိုးရဌာနတွေမှာ အလုပ်ရဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ လစာအနည်းဆုံး တစ်ရက် ဒေါ်လာ ၂၅၀ အခွန်မပါ ရတယ်။ ဒီလိုအခွင့်အလမ်းမျိုးကို ခင်ဗျားတို့ယူသင့်တယ်။ မြန်မာအစိုးရကပေးတဲ့လစာကတော့ မြန်မာငွေ နှစ်သိန်းတော့ ရနိုင်တယ်။ ရာထူးကတော့ အရာရှိလို့တော့ ခေါ်မှာပေါ့။ မိသားစုအတွက်တောင် မလောက်ငှတဲ့ နှစ်သိန်းကို ယူမလား။ တနှစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်း ၇၀၀ ယူမလား။ ကြိုက်တဲ့လမ်းရွေးပါ။
ကျနော်လည်း တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ လူငယ်ပညာတက်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်တာပိုကိုက်တယ်။ Skilled Person လျှောက်တာကိုအသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီကိုသွားပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, January 15, 2010
တိုးချဲ့ CEC များသည် Aged Care Workers တွေများလား?????
CEC အဖွဲ့ဝင်သစ်များမှာ ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်း၊ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးဟံသာမြင့်၊ ဦးသိန်းညွန့်၊ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးချယ်ခံ အမတ်များ ဖြစ်ကြသည်။
နယ်စပ်အခြေစိုက်လူ့ဘောင်သစ်ပါတီလို NLD လည်း လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ဗဟိုကနေရွေးချယ် ရပါသည်။ What is လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ???? လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေကြောင့်...။ သိတ်လှတဲ့စကားလုံးပါလားနော်။ အောက်ခြေအဖွဲ့ဝင်တွေမှာ လုံးဝအာဏာမရှိတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါလားနော်..။ အာဏာရတာတောင် အောက်ခြေက တင်တဲ့ စီအီးစီ ဖြစ်ပါ့မလား။ ကျနော်တော့ ဒီလိုတွေးမိပါတယ်...။
တိုးချဲ့ အဖွဲ့ဝင်များကိုကြည့်ပါ...ဆရာဝန်နဲ့ရှေ့ နေတွေဆိုတော့ Aged Care Wrokers လုပ်ဖို့လားမသိဘူး။ လူအိုတွေကို ဆေးပေး၊ မီးယူ၊ အီး..ကုန်ပေးဖို့ ဘဘတို့များ လူငှားလေသလား..။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများဟာ ဒီမိုကရက်တစ်အာဏာရှင်လို့ နာမည်တပ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း....။ မြန်မာတွေ အာဏာရှင်လုပ်တာဝါသနာပါတယ်။ အဘိုး၊ အဘွား၊ အဖေ၊ အမေ၊ ကိုးကွယ်ရာဘုန်းကြီး၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ၊ အားလုံးဟာအာဏာရှင်တွေပါ။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလည်းအာဏာရှင်တခုဖြစ်ပါတယ်..။ ဥပမာ...လူကြီးပြောတာ နားထောင်၊ ပြန်ပြောရင် ငရဲကြီးတယ်၊ မိုက်ရိုင်းတယ်...စသဖြင့်...။
တိုးချဲ့ CEC များသည် Aged Care Workers တွေများလား?...